एस्टेरोइड के हो र कसरी तिनीहरू उल्का पिंडहरू भन्दा फरक हुन्छन् नेटवर्क मौसम विज्ञान
ब्रह्माण्ड थाहा पाउन को लागी एक शानदार चीज हो। प्रत्येक दिन हामी यसको बारेमा बढी जान्छौं र हामी रहस्यहरू डिसेफर गर्दछौं जुन सबै चीजको सञ्चालनमा सम्बन्धित छ। पक्कै पनि तपाईंले देख्नुभएको छ वा कुरा गर्नुभएको छ क्षुद्रग्रह। यो पनि सम्भव छ कि तपाईले उनीहरुलाई उल्का पिण्डले भ्रममा पार्नु भएको छ किनकि तपाईलाई अवधारणा राम्रोसँग थाहा छैन एस्टेरोइडहरू चट्टानहरूले बनाएका साना वस्तुहरू बाहेक अरू केहि पनि हुँदैनन्, मुख्यतया, र त्यो, अन्य ग्रहहरू जस्तै सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्छ।
यदि तपाईंसँग asteroids के हो र कसरी तिनीहरू meteorites भन्दा फरक छन् भन्ने बारे प्रश्नहरू छन् भने, यो तपाईंको पोष्ट हो। हामी तपाइँलाई यी सबै कुराको बृहत विवरण दिनेछौं।
1 एक क्षुद्रग्रह के हो र यसमा के विशेषताहरू छन्
2 एस्टेरोइडका प्रकारहरू
3 कुन जानकारी निकालिन्छ?
4 उल्का पिण्डहरूसँग भिन्नता
एक क्षुद्रग्रह के हो र यसमा के विशेषताहरू छन्
हामीले उल्लेख गरिसक्यौं, एउटा एस्टेरोइड एउटा चट्टान वस्तुबाहेक अरू केही छैन जुन सूर्यलाई परिक्रमा गर्दछ। यद्यपि यसको आकार ग्रहको जस्तो नभए पनि यसको कक्षा समान छ। त्यहाँ धेरै एस्टेरोइडहरू छन् जुन हाम्रो वरिपरि परिक्रमा गर्दैछ सौर्य प्रणाली। उनीहरूको विशाल बहुमतले हामी जान्दछौं कि क्षुद्रग्रह बेल्टको रूपमा। यस क्षेत्र को कक्षा को बीच छ मार्टे y बृहस्पति. ग्रहहरू जस्तै, तिनीहरूको कक्षा दीर्घवृत्त हो।
तिनीहरू केवल यो बेल्टमा फेला पर्दैनन्, तर अन्य ग्रहहरूको ट्रैक्टोररीमा पनि फेला पार्न सकिन्छ। यसको मतलव यो चट्टान वस्तुको सूर्यको वरिपरि उहि बाटो छ, तर चिन्ताको विषय त्यहाँ छैन। तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि यदि एउटा ग्रह को ग्रह हाम्रो ग्रह जस्तै उही कक्षामा छ भने, समय आउँछ जब यो टक्कर र विपत्ति पैदा गर्न सक्छ। यो यस्तो छैन। तिनीहरू आपसमा नचलेको रूपमा चिन्ता लिनु आवश्यक पर्दैन।
एउटा ग्रह जुन कक्षाको रूपमा समान कक्षामा रहेको एस्टेरोइडहरू समान गतिमा जान्छ। त्यसकारण उनीहरूले कहिल्यै भेट्ने छैनन्। यो हुनको लागि, या त पृथ्वीले बिस्तारै सर्नु पर्ने थियो, वा एस्टेरोइडले यसको गति बढाउनु पर्ने थियो। बाह्य अन्तरिक्षमा यस्तो हुँदैन जबसम्म बाह्य बलले यो गरिरहेको हुँदैन। यस बीच, गति कानून को जड़ता द्वारा शासित छन्।
यी एस्टेरोइडहरू सौर प्रणालीको गठनबाट आएका हुन्। जस्तो कि हामीले केहि लेखहरूमा हेरीसकेका छौं, सौर्य प्रणाली लगभग formed. around अरब वर्ष पहिले गठन गरिएको थियो। यो भयो जब ग्यास र धुलोको ठूलो क्लाउड पतन भयो। यो भएपछि धेरै जसो सामग्रीहरू सूर्यको रूपमा बनेको बादलको बीचमा खसे।
बाँकी सामग्री ग्रह बन्यो। यद्यपि, क्षुद्रग्रह बेल्टमा रहेका वस्तुहरूलाई ग्रह बन्ने मौका थिएन। Asteroids विभिन्न स्थान र सर्तहरूमा गठन भएकोले, तिनीहरू समान छैनन्। प्रत्येक सूर्यबाट फरक दूरीमा गठन गरिएको हो। यसले परिस्थिति र संरचनालाई पनि फरक बनाउँछ।
हामी वस्तुहरू फेला पार्दछौं जुन गोल छैन। बरु उनीहरूसँग दांतेदार र अनियमित आकारहरू छन्। यी अन्य वस्तुहरूको साथ लगातार वारहरू द्वारा गठन गरिन्छ जब सम्म तिनीहरू त्यस्तो हुनुपर्दैन।
अरूहरू सयौं किलोमिटर व्यास र विशाल हुन्छन्। तिनीहरू स-साना हुन्छन्, जस्तै ढु a्गा। ती मध्ये धेरै जसो विभिन्न प्रकारका चट्टानबाट बनेका छन्। धेरै जसोसँग निकल र फलामको मात्रा हुन्छ।
कुन जानकारी निकालिन्छ?
यी चट्टान वस्तुहरूले ब्रह्माण्डको ज्ञानको बारेमा केही जानकारी प्रदान गर्न सक्छन्। किनभने तिनीहरू एकै समयमा सौर्य प्रणालीको बाँकी भागको रूपमा गठन भएका थिए, यी अन्तरिक्ष चट्टानहरूले हामीलाई ग्रहहरू र सूर्यको इतिहासको बारेमा जानकारी दिन सक्छन्। वैज्ञानिकहरूले यी क्षुद्रग्रहहरू यसको बारेमा जानकारी लिन सक्छन्।
त्यहाँ थुप्रै नासा अन्तरिक्ष अभियानहरू छन् जहाँ एस्टेरोइडहरू अवलोकन गरिएको छ। उडानमा कि NEED शूमेकर अन्तरिक्ष यानले इरोसको नाममा बनायो (एउटा ग्रहलाई दिइएको छ जुन नाम) यो चट्टान वस्तुको संरचना र गठनको बारेमा निश्चित डेटा प्राप्त गर्न यसमा उत्रियो। अरु अन्वेषण अन्तरिक्ष अभियानहरू भएका छन् जसमा प्रभात अन्तरिक्ष यानमा भेट्न गए एस्टेरॉइड बेल्ट भेट्न जाँदा भेस्टाको विश्लेषण गरिएको थियो, एउटा सानो ग्रह जत्तिकै ठूलो ग्रह र ओएसआईआरआईएस-रेक्स अन्तरिक्ष यानले नजिकैको क्षुद्रग्रहको भ्रमण गरेको छ। पृथ्वीलाई बेन्नू भनिन्छ र हाम्रो ग्रहमा नमूना ल्याउनुहोस्।
उल्का पिण्डहरूसँग भिन्नता
जस्तो कि हामीले लेखको सुरूमा उल्लेख गरिसक्यौं, निश्चित रूपले तपाईंले कहिल्यै क्षुद्रग्रहको लागि उल्का पिण्डको गल्ती गर्नुभयो। र यो यो हो कि एस्टेरोइडहरू सौर प्रणालीमा रहेको स्थितिमा आधारित छ। उदाहरण को लागी, हामीले त्यो पहिले नै भनिसकेका छौं जुन मंगलबार र जुपिटर बीचको क्षुद्रग्रह पट्टीमा छन्। त्यहाँ अरू पनि छन् जुन NEAs भनिन्छ किनभने तिनीहरू पृथ्वीको नजिक छन्। हामीले ट्रोजन्स पनि फेला पार्‍यौं जुन बृहस्पतिको कक्षाको वरपर छन्।
अर्कोतर्फ, हामीसँग सेन्टोरहरू छन्। यी ती हुन् जुन सौर्यमण्डलको बाहिरी भागमा छन् Oort Cloud। अन्तमा, हामी पृथ्वीहरु लाई coorbit कि क्षुद्रग्रहहरु संग बाँकी छन्। यो हो, जुन पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण र "लामो समयावधिको लागि" कक्षा द्वारा कब्जा गरिएको छ। तिनीहरू फेरि टाढा हिंड्न पनि सक्छन्।
अहिले सम्म म आशा गर्छु कि सबै ठीकठाक छ। अब यो उल्का पिण्ड के हो भनेर थाहा पाउनु हो। उल्का पिण्ड पृथ्वीमा हिट गर्ने क्षुद्रग्रह भन्दा बाहेक अरू केहि छैन। यो नाम दिइएको छ किनकि जब यो वातावरणमा प्रवेश गर्छ, यो एक उल्का भन्ने प्रकाशको निशान छोड्छ। यी मानवहरूको लागि खतरनाक हो। यद्यपि हाम्रो वातावरणले हामीलाई उनीहरूबाट जोगाउँछ, जब तिनीहरू यसको सम्पर्कमा आउँछन्, तिनीहरू पग्लन्छन्।
उनीहरूसँगको कम्पोजिशनमा निर्भर गर्दै तिनीहरू ढु ,्गाको धातु, धातु वा दुबै हुन सक्छन्। उल्का प्रभाव पनि सकारात्मक हुन सक्छ, किनकि यसको बारेमा धेरै जानकारी लिन सकिन्छ। यो सम्भव छ कि यसले क्षति पुर्‍याउन सक्दछ यदि यो पर्याप्त छ भने वातावरण उनीहरूलाई सम्पर्कमा आउँदा पूरै नष्ट गर्दैन। आज यसको पूर्वानुमान थाहा पाउन सकिन्छ।
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईले एस्टेरोइड र उल्का बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » एस्टेरोइड्स